Template:Barreeffamoota sirreessuu barbaaddan thumb|280px|right|Global mean surface temperature anomaly 1850 to 2020
Mean surface temperature anomalies during the period 2011 to 2020 with respect to the average temperatures from 1951 to 1980
Ho'a Addunyaa (global warming) kan jedhamu itti darama adeemuu avreejiii tempireechara qilleensa lafatti dhi'aatee argamuu fi bishaan kan waggaa kudhanan kan duraa keessatti adeemsifamee fi kan itti fufa adeemuudha.
Avreejii tempireechariin qilleensa addunyaa lafatti dhi'aatee argamu waggaa dhibba bara 2005 dura jirutti hanga 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) guddate turee. Waldaan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan jedhamu akka waliigalanit "guddachuun avreg temprechera jiddu cencherii 20ffat ademsifame kan ka'ee sababa bayyina gazii greenhousii anthropogenic kan greenhouse effect kessan dhufuun". Ademsifami dhalotaan ta'u kan akka Jijjirama Aduu (Solar Variation) Volcano wajiin walit qabatee bara Industrii-duraa hanga 1950ffat ho'a qillensaf sababa yoo ta'uu, bara 1950 hanga amma immo qabana'u qillensaf sababa ta'a jedhame yadatama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%27a_Adunya&oldid=37559" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 14 Bitootessa 2022, sa'aa 20:47 irratti.